China imepụta ngwa ụlọ Manufacturer na Supplier | Meste
Nhazi ngwa ụlọ bụ imepụta ọdịdị na ime nke ngwa ụlọ. Ọ gụnyere atụmatụ nke akụkụ plastik na akụkụ ígwè.
N'oge a, ihe ndị mmadụ chọrọ maka ngwa ụlọ abụghị naanị ọrụ, kamakwa ọchọrọ ịchọ mma nke ọdịdị pụrụ iche, nke ahaziri iche na nke nka.
Uche nke ngwa eletriki ụlọ dị na plastik na ihe igwe, jikọtara ya na echiche ịchọ mma nke ndị mmadụ na arụ ọrụ ngwaahịa, na-eji sọftụwia imepụta 3D iji mepụta ọdịdị na usoro nke ngwaahịa a, yana n'ikpeazụ mmepụta eserese maka ebu na akụkụ mmepụta.
Mestech na-enye ndị ahịa ụdị ụlọ na ngwa elektrọnik na-esote ụlọ a:
(1) Ngwa ụlọ nke aka gị: ọkachasị gụnyere onye na-ehicha ntutu, igwe na-acha ọkụ eletrik, isi igwe eletriki, ezé ezé eletriki, akụrụngwa elektrọnik, ịhịa aka na kọmputa, wdg.
(2) Iji ihe dijitalụ eme ihe nkeonwe: ọkachasị kọmputa mbadamba, akwụkwọ ọkọwa okwu elektrọnik, igwe nkwụ mmụta, igwe egwuregwu, kamera dijitalụ, ngwaahịa agụmakwụkwọ ụmụaka, wdg.
(3) Ngwa ụlọ: tumadi gụnyere ọdịyo, igwe na-ekpo ọkụ eletrik, humidifier, ihe nhicha ikuku, igwe na-enye mmiri, mgbịrịgba ọnụ ụzọ, wdg.
Ezinaụlọ ngwaahịa ngwaahịa
Nkwụ egwuregwu egwuregwu
Igwe igwe okwu olu umuaka
Ezinụlọ dijitalụ projector
Robotic agụụ Cleaner
Ihe nhicha ikuku
Masshịa aka ụkwụ
Design atụmatụ nke ezinụlọ electronic ngwa
Ihe okike 1.Ekike nke ngwa eletriki nke ụlọ bụ ọdịdị ọdịdị, nhazi usoro yana atụmatụ nke akụkụ ụfọdụ. N'adịghị ka ụlọ ọrụ mmepụta ihe,
(1) Kwusi ike na nhazi nke ọdịdị anya, njirimara na njiri onwe onye.
(2) gosipụta ahụmịhe ndị ọrụ. Dị ka nke ọma ọrụ, mfe na-ebu, ubi waterproof.
Lekwasị anya na nha, olu na ibu ibu nke ngwaahịa unit.
(4) .Uche icho mma ngwaahịa 'anya na-enyemaka nke udidi, electroplating, sere, silk ihuenyo na ndị ọzọ na elu ọgwụgwọ usoro.
2.Dị ka ahụ mmadụ na-eme kwa ụbọchị, ngwa elektrọnik nwere ngwa ngwa nchekwa
(1). ihe eji eme ihe adighi aru na aru mmadu Enwere uzo ato nke RoHS, iru na 3C na China. Ihe na-emerụ ahụ dị na ụkpụrụ maka akụkụ ngwaahịa
(2) Igwe radieshon electromagnetic agaghị adị elu karịa ọkwa nchekwa nke ahụ mmadụ nabatara electromagnetic nwere ike imetụta ahụike ndị mmadụ. Ngwa eletrọniki, ọkachasị ngwaahịa nkwukọrịta nke dabere na akara ikuku, ga-ewepụta radieshon electromagnetic. Na nhazi nke ngwaahịa ndị a, ọ dị mkpa iji belata ọnụọgụ nke electromagnetic na oke nchekwa.
(3) Igwe mkpuchi eletrik: maka ụfọdụ ngwa ngwa ụlọ nwere nnukwu ọkụ eletrik (AC), mgbochi mgbochi, mkpuchi ma ọ bụ imepụta mmiri kwesịrị ime na ngwaahịa iji zere ihe ọghọm nchekwa.
Mestech na-enye ndị ahịa na OEM imewe, ebu n'ichepụta, akụkụ mmepụta na nzukọ nke nkịtị ezinụlọ electronic ngwaahịa. Nwere olileanya na ndị ahịa dị mkpa ịkpọtụrụ anyị, anyị ga-enye gị ọrụ kachasị mma anyị.
Nke gara aga: Nhazi ụlọ eletrọniki
Osote: Plastic ngwaahịa imewe
Plastic reels maka eriri na waya